DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA NVIDIA GEFORCE GT 520M - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Nduzi ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GT 520M
Rap dị ka akụkụ nke egwú hip-hop, nakwa otu ihe nke ụdị ndị ọzọ, bụ otu n'ime egwu egwu kachasị ewu ewu na narị afọ nke 21. Ọzọkwa, otu omenala dị iche iche na-emepụta ụdị ụdị a nke a na-akpọ ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-ede egwú maka ha bụ ndị na-eti ọkpọ.
Dị ka ihe ndị ọzọ na kọmputa, a na-edekarị bits na-eji ọrụ nyocha dijitalụ - DAW. Ndị a bụ mmemme nke na-enye gị ohere iji usoro egwu zuru ezu, ya bụ, mejupụtara, ndokwa, ịgwakọta na ịmụta. Nhọrọ nhọrọ dị mfe ma dị mfe karị bụ ọrụ mmepụta ihe n'ịntanetị.
Hụkwa: Otu esi dee egwu na weebụ
Kedu esi ede bits online
Enwere otutu sequencers web na ntaneti di iche iche na netwọk, mana ndi na-eguzo n'ezie nwere ike gua ya na aka aka. Otú ọ dị, ọbụlagodi ọrụ kachasị elu maka ịmepụta egwu agaghị enwe ike iji ya tụnyere ihe ngwọta desktọọpụ ọkachamara. Ihe ndi ozo di n'ime ya di nma maka ide ihe edere ma o bu ihe di mfe dika ihe di iche.
Usoro 1: Audiotool
Otu n'ime ụlọ ọrụ ntanetị di na ntanetị nke kachasị mma, nke na-enye gị ohere ịmepụta egwu site na iji analogs dị iche iche nke ndị a maara nke ọma, ndị ọrụ drum, pedals, synthesizers na ngwá ọrụ kọmputa ndị ọzọ. Iji rụọ ọrụ na ihe ahụ, ị ​​nwere ike iji ma ọ bụrụ na e mepụtara ihe atụ na ndị e mere ebe a na nchịkọta ahụ wuru. Tụkwasị na nke ahụ, Audiotool nwere sistem zuru ezu, ọbá akwụkwọ nke ihe nhazi, ihe nhazi ngwa ngwa, na ike iji rụọ ọrụ na MIDI.
Audiotool ọrụ ntanetị
Enweghị ike ịdebanye aha iji ngwa weebụ a, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ọganihu ọrụ na egwu na sava weebụ Audiotool, ị ga-emerịrị akaụntụ. Naanị pịa akara ngosi ahụ na ederede ahụ "Nbanye" ma banye na iji otu netwọk mmekọrịta ma ọ bụ adreesị email.
Ka ị gaa na ọdụnụ onwe ya, pịa bọtịnụ ahụ. "App" na n'elu menu mmanya.
Na ibe ọhụrụ ahụ, ị ​​ga-ahụ windo a na-anabata nke ị ga-ahọrọ ma ị ga-amalite ịmepụta egwu site na "chara ọcha" ma ọ bụ jiri otu n'ime ndebiri atọ dị njikere. Ihe oru efu, dika o di mfe iche, bu ihe. "Eberibe".
Ịhọrọ nhọrọ ị chọrọ ịmalite ịmalite ọrụ na egwu ahụ ga-akpọrọ gị na ngwa ahụ n'onwe ya. Ọ bụrụ na ị maara Bekee, ị nwere ike ịmatakwu ngwa ngwa nke ọrụ ntanetị, nke a chọrọ na window ahụ.
Audiotool nke interface dị nnọọ mfe ma dị omimi. Oghere dị ukwuu na desktọọpụ, ebe ị nwere ike ịdọrọ ụda na ihe atụ sitere na panel ahụ n'aka nri, ma emesịa mekọrịta ha. N'okpuru ngwa ahụ, e nwere usoro iheomume iji rụọ ọrụ na egwu egwu egwu na sampler.
Ị nwere ike ịchekwa ọrụ ahụ dịka ihe eji eji ihe ahụ "Zọpụta Draft" menu "Njikwa". Ma mbupu nke egwu okokụre na faịlụ ọdịyo na-eme n'ọtụtụ nzọụkwụ. Ihe mbụ ị ga-achọ ịdea abụ na saịtị ahụ. Iji mee nke a, gaa otu menu. "Njikwa" wee pịa "Kwusaanụ"site na mbụ ịmepụta ihe.
Kọwaa aha nke egwu, tinye ihe mkpuchi, mkpado na nkọwa dị ka achọrọ, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Kwusaanụ".
A ga-asụgharị ọrụ ahụ ma bipụ ya. Iji gaa ozugbo na egwu ahụ, pịa "Gosi m" na igbe.
Iji budata egwu ahụ na kọmputa gị, ị pịa bọtịnụ ahụ. Download ma họrọ usoro achọrọ nke faịlụ ọdịyo na listi ndọpụta.
N'ozuzu, Audiotool nwere ike ịkpọ usoro DAW zuru ezu na ihe nchọgharị gị, ebe ọrụ ahụ nwere ngwaọrụ niile dị mkpa maka ịmepụta egwu dị egwu. Maka onye na-eti ihe, nke a bụkwa ezigbo ihe.
Rịba ama na iji rụọ ọrụ, Adobe Flash Player ga-arụnyere na kọmputa gị. Tụkwasị na nke ahụ, ihe nchọgharị ntanetị dị mkpa.
Usoro 2: Soundtrap
Dị ike ma dị mfe iji ụlọ ọrụ n'ịntanetị. Soundtrap nwere ihe niile maka ịmepụta egwu egwu - ọ bụghị naanị egwu, mana ọdịdị ndị ọzọ nke egwu. Akụ a na-enye gị ngwá ọrụ a na-agbanwe agbanwe, nnukwu ọbá akwụkwọ nke ihe atụ na, dị mkpa maka onye na-eti ihe, nke kachasị adaba ngwa ngwa. Enwere nkwado maka ụzọ mkpirisi na, n'ezie, ikike ijikọta bọtịnụ MIDI.
Soundtrap ọrụ ntanetị
Naanị ndị ọrụ ikikere nwere ike ịrụ ọrụ na ọdụ ụgbọelu, mgbe ị debanyere aha gị, a ga-enye gị ohere oge ikpe. Ya mere, ihe mbụ mgbe ị gara na saịtị ahụ, pịa "Jikọọ Ugbu a" ịmalite usoro ndebanye aha.
Na windo ahụpụta, họta ọrụ nkeonwe nke ọrụ na ọrụ - "Ojiji nkeonwe".
Wee mezie akaụntụ site na iji Google, Facebook, akaụntụ Microsoft ma ọ bụ adreesị email.
Iji gaa na ụlọ ihe nkiri, pịa njikọ "Studio" na nchịkọta n'elu nke menu ọrụ.
Malite na "chara ọcha" ("Blank") ma ọ bụ họrọ otu n'ime ndebiri ndebiri dịnụ.
A na-eme ka ngwa ngwa weebụ dị na omenala kachasị mma nke mmemme sampler: ị na-amalite ịmalite usoro egwu ọ bụla na mkparịta ụka usoro iheomume, ebe ihe niile e kere ma ọ bụ egwu ndị dị na ya dị. N'okpuru ebe a bụ njikwa nhazi na ntọala ndị mejupụtara, dị ka tempo, pitch na metronome.
Enwere ike iji nweta akara ngosi na akụkụ aka nri nke ibe.
Mgbe ị kwụsịrị ịrụ ọrụ na egwu, ibudata ya na kọmputa gị, gaa na menu. "Njikwa" - "Mbupụ" ma họrọ usoro achọrọ nke faịlụ ikpeazụ.
N'adịghị ka ọrụ Audiotool ahụ a tụlere na mbụ, akụ a anaghị achọ ihe ngwanrọ ọ bụla maka ọrụ ya. Soundtrap na-esote usoro mmepe weebụ ọ bụla na-eji teknụzụ dịka HTML5 na API, Web Audio. Ọ bụ ya mere ikpo okwu ji arụ ọrụ nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla, na-emegharị ma n'okwu gbasara interface na n'usoro ngwanrọ.
Esi emepụta egwu na kọmputa gị
Ọrụ ndị a kọwara n'isiokwu ahụ bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị mma, ma ọ bụghị naanị ndị ahụ. Netwọk nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ntanetị dị elu ma onye ọ bụla n'ime ha nwere atụmatụ ụfọdụ, na ọbụna uru. Dị ka ị nwere ike ịhụ, ọ ga-ekwe omume ịde blọgụ ọ bụghị naanị site na iji ngwanrọ ọkachamara, kamakwa na enyemaka nke ngwa weebụ, nke, ọ bụ ezie na ha dị ala karịa "ụmụnne ndị okenye" ​​na arụmọrụ, mana ọ bụghị na njem ha na ịnweta ha.